भाग्य न्यौपानेको विरोध गर्नेलाई रबि लामिछानेले दिए यस्तो कडा जवाफ…. (भिडियो सहित) « Nepal's number 1 Entertainment news portal
भाग्य न्यौपानेको विरोध गर्नेलाई रबि लामिछानेले दिए यस्तो कडा जवाफ…. (भिडियो सहित)
Published : 8 August, 2020 8:24 am
केही दिन यता केयर बाल गृह की सञ्चालिका पुष्पा अधिकारीले एक बच्चाको नाटकीय उद्दार गरे पछि उनको विरोध भयो , त्यस्तै भाग्य न्यौपाने ले गरेको अन्तर्वतलाई कतिपयले आलोचना गरे , भने कतिपयले उनको समर्थन गरे भाग्यको बिरोध गर्ने लाई रबि लामिछानेले जाजरकोटबाट कडा जवाफ दिएका छन् । हेर्नुहोस् जस्ताको तस्तै:
भाग्य न्यौपानेलाई झण्डै २ मिलियन ले हेर्दा रहेछन् । कुनै मुलाधरेलाई मन नपरेर हुन्छ र ? जनताले मन पराएको मान्छेलाई चिन्दा पनि चिन्दीन हेर्दा पनि हेर्दिन भनेर ढोंग गरेर हुँदैन । एउटा दुइटा गल्ती सबैका हुन्छन । त्यत्रो मान्छेलाई सहयोग गरेर त्यत्रो मान्छेको प्रिय भएको मान्छेका विषयमा मूल धारले कहिल्यै नलेख्ने । कहिल्यै नबोल्ने । अनि जब उसको एउटा गल्ती हुन्छन् अनि १२ हात जति लामो आर्टिकल लेख्ने त ! भाग्य न्यौपाने पपुलर रहेछ भन्ने कुरा उसले एउटा गल्ती गर्दा मात्र थाहा भयो ?